Dhacdadii foosha-xumeyd ee Islii ka dib, Maxaa xal u ah dadka Soomaaliyeed ? | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Dhacdadii foosha-xumeyd ee Islii ka dib, Maxaa xal u ah dadka Soomaaliyeed ?
Sunday 13 April 2014 | First Look Media Ethics | Waxaan marka hore muuujinayaa sida aan uga xumahay dhibaatadii ku dhacday Shacabkii Soomaaliyeed ee ku noolaa Xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi,Kuwaas oo loola dhaqmay si waxuushinimo ah oo ka soo horjeedda dhammaan Qawaaniinta Caalamiga ah,ka dib markii dumar,caruur iyo waliba dad waaweyn laga buuxiyey meelo aan ku habooneyn in dad lagu hayo islamarkaana aan lahayn adeeggii loo baahnaa.
Bal inta aanan u galin,Waxa Soomaali xal u ah dhacdadan ka dib, Bal aan marka hore u mahadceliyo dhammaan Soomaalida Kenya oo runtii ka dhiidhiyey falkii fooxsha-xumaa ee ay ku kaceen Ciidamada Amniga ee Kenya,Kuwaas oo dhaqan iyo caado ay u tahay in ku tuntaan dadka rayidka ah mararka ay fulinayaan howlgallo gaar ah.Waxaana si gaar ah Salaan iyo Mahadnaqba ugu dirayaa Xilidhibaanada Soomaalida Kenya,Kuwaas oo runtii qaatay kaalin lama ilaawaan ah.
Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur oo runtii ka soo baxay kaalintii looga baahnaa,Waxaana ku leeyahay Safiirka ma ilaawi doono dadaalkaaga aan hagarta lahayn.Waxaa sidoo Iyagana amaan leh Warbaahinta Moment Media Ethics oo si hagara la’aan u soo gudbiyey dhacdadani gilgishay dadka Soomaaliyeed.
Hadaan u soo laabto Qormadeyda,Waxa ay dhacdadani duruus iyo cibraba u tahay guud ahaan dadka Soomaalida, gaar ahaan Soomaalida ka timid Soomaaliya oo aad mooddo in ay ku noolaayeen nolol khiyaale oo aan ku dhisneyn waaqici dhab ah, ka dib markii ay is lahaysiiyeen dal aan dalkooda ahayn, Iyagoo waliba galiyey wixii hanti ahaa oo ay haysteen.!!
Dhacdadani waxa ay banaanka keentay halista iyo baylahda haysata dadka Soomaaliyeed meelkastaba ha kaga noolaadeena Dunida,Maxaa yeelay wixii ka dhacay Islii waxa ay na tuseen in qofka Soomaaliga ah uu halis ku jiro xitta haddii uu haysto Sharci iyo Dukumiinti sax ah,Waana waxa laga baran karo wixii ka dhacay Islii.
Falkii islii, Waxa uu hurdada ka toosisay Shacab weynaha Soomaaliyeed ee laga waayey war heshiiya oo joojiya Qabyaaladda iyo daba orodka Cadowgiina,Waxa uu sidoo kale Falkani banaanka u soo saaray xaqiiqda ee ay ku sugan yihiin Maamulada ka jira Dalka ,Kuwaas oo sheegan jiray in matalaan dadka Soomaaliyeed laakiin ay Maanta cadaatay in ay yihiin Cumalo iyo Jawaasiis lagu saladay Soomaali ka dib markii ay ka aamuseen wixii ka dhacay Islii.hadaba Maxaa laga bartay dhacdadani Foosha-xun ? Maxaase xal u ah Soomaali?.
1-In aysan suurtagal ahayn in qofka Soomaaliga ah uu ku noolaado sharaf iyo cizi, Isaga oo aan lahayn dowlad xoogan oo ilaalisa danihiisa iyo noloshiisa.
3-In Baarlamaanka Federaalka ee hadda jiraa uu yahay magac-uyaal aan wakiil ka ahayn Shacabka Soomaaliyeed ka dib markii ay ka dhiidhin waayeen dhibaatadii loo geystay Shacabkoodii.
4-In Nidaamka Federaalka iyo Maamul Goboleedyadaba aysan ahayn Maslaxad Soomaaliyeed ka dib markii ay ka aamuseen dhibaatadii ka dhacday Xaafadda Islii, Iyagoo awoodi waayey xittaa in ay canaareeyaan wixii dhacay.
5-In Soomaalida Kenyan aysan wali ahayn Muwaadiniin buuxda oo la mid ah Muwaadiniinta kale ee Kenyaanka ah, Ayna u baahan yihiin dowladd Soomaaliyeed oo xoog leh oo ilaalisa danahooda inta ay ku hoos nool yihiin Xukunka Kiikuuyada.
Hadaba haddii ay qatar ku jiraan Shacabkii Soomaaliyeed gaar ahaan kuwii u qaxay dibadaha, Islamarkaana aysan jirin dowlad waxtar ah oo wax ka qabata dhibaatooyinkan soo noqnoday hadaba maxaa xal ?.
Maadaama ay soo noqnoqdeen dhibaatooyinkani islamarkaanin aan lagu sii Jiri Karin waxani oo kale, Sidoo kalena aysan jirin dowlad rasmi ah oo lagu aamini karo dalka iyo dadkaba. Maamul Goboleedyaddiina ay noqdeen kuwa u shaqeeya dowladaha dariska, Oo aan ka hadli Karin dhibaatada ay geystaan dowladahaasi ama ha ka geystaan dalka Soomaaliya gudihiisa ama ha ka geystaan dalalkooda.
1-In la dhiso Xisbi Wadani ah sida SYL oo kale, kaas oo ay hogaamiyaan dad Wadaniyiin ah sida oo kale, Si ay ula wareegaan talada dalka Inta aan la gaarin 2016,waa hadaan dooneyno in aan ka baxno dhibaatada. Insha alaah gadaal ayaan ka soo sheegayaa sida loo dhisayo Xisbigaasi iyo sida u uu ula wareegayo talada dalka.
Si looga baxo dhibaatada,waxa aan u baahannahay inaan la nimaano xal ka duwan waxa hadda socda tusaale ahaan dowladda hadda jirta iyo hogaankeeda waa faashileen waqti lumis ah.Alshabab waa diideen in ay Soomaali wadahadasho.Maamul Goboledyada hadda jiraa kama shaqeynayaan dowladnimo iyo wanaag sidaa daraadeed waa inaan la nimaadnaa Xal Sedexaad.
Gaba gabadii waxaan ka codsanaayaa Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Culimada,Aqoonyahanada,Hooyooyinka iyo dhamaan Dhalinyarada in ay gacan ka geystaan sidii loo dhisi lahaa Xisbiga Xuriyadda ah si loo badaadiyo dalkan iyo dadkiisaba Haddii kale marka ay wax dhacaanba meelaha ha la orordo waa caado aad leedihiin.
Warqad furan oo ku socota Ra’isal wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Sidee loo dhisaa Xisbi Wadani ah?